काम गर्ने क्रममा हात का’टिएपछि कम्पनीले नि”काली दियो, त्यसपछि घर जान्छु भन्दा…. – Khula kura
काम गर्ने क्रममा हात का’टिएपछि कम्पनीले नि”काली दियो, त्यसपछि घर जान्छु भन्दा….
शंकर परियार विगत चार वर्षदेखि मलेसियामा छन्। उनी मलेसियाको जोवरबारू स्थित टिएफ भ्यालु मार्ट कम्पनीमा कार्यरत थिए। उक्त कम्पनीमा पारिश्रमिक थोरै र ओभर-टाइम सुविधा समेत नभए’पछि उनले झन्डै चार वर्षपछि त्यो कम्पनी छा’डे। त्यसपछि अ’वैध बनेका उनी जोवरबारू स्थित एक फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थाले।
केही वर्ष काम गरी आफू र परिवारका लागि खुसी बटुल लेर फर्किने सोच राखेका उनको सपना दुई साता नपुग्दै टु’क्रि”यो। काम गर्न थालेको दुई साता नहुँदै मे’सिनले उनको दा इने हा त का”ट्यो।
हात एकदमै ग’हिरो सँग का’टिएको थियो। मेरो दाइने हात झन्डै दुई टु’क्रा नभएको। अब मेरो हात जोडिँदैन होला भनेर म एकदमै ड’रा’एको थिएँ,’।
कम्पनीले उनको ‘हातको उप चार गर्न थोरै रकम दियो। तर पूरै निको हुनेसम्मको उप’चार गरिदिएन। रि’पोर्ट कस्तो आयो भनेर पनि शंकरले जानकारी पाएनन्। मेरो हात अझैसम्म नि’को भएको छैन। कति समयपछि नि को हुन्छ वा अब के गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि थाहा भएन,’
‘अहिले त उडान बन्द छ। उ’डान खुले पनि घर जाने पैसा छैन। दाइने हातको पनि बुढी औं ला बा हेक अरू च’ल्दैन। उप’चार गर्न पनि पाइनँ।’
शंकरले भने, ‘सुपरभाइजरलाई रि’पोर्ट कस्तो आयो दिनुस् न भनेको हरा’यो भनेर दिनुभएन। शंकरको हा’तले काम गरेन। त्यसपछि कम्पनीले उनलाई खान भयो। उनले त्यो कम्पनी पनि छाडनुपर्ने भयो।
नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको कम्पनी छा डेर अ वैध बनेका शं’कर अ’लपत्र परे। अब उनलाई स्वदेश फर्कन पनि सहज थिएन। न स्वदेश फर्कने पैसा नै थियो। ‘मसँग एक पैसा पनि थिएन। म’र्नु न बाँ’च्नु भएको थिएँ। धन्न एक जना मनकारी नेपाली साथी भेटिनुभयो र उहाँले खान बस्न दिनुभएको छ।
तर अरूको देशमा साथीको भरमा कति दिन बाँ’च्न सकिएला,’ उनले भने, ‘अहिले त उडान बन्द छ। उ’डान खुले पनि घर जाने पैसा छैन। दा इने हा तको पनि बुढी औं ला बाहेक अरू च’ल्दैन। उप’चार गर्न पनि पाइनँ।’ मलेसियामा अ’लप’त्र परे पैसा पठाइदिनू भनेर घरमा भन्ने अवस्था पनि छैन उनको।
बूढा आमाबुबा, श्रीमती र बच्चा शंकरसँगै आश्रित छन्। कतै बाट सहयोग मिले देश फर्किन पाउँथे। बरू ऋ’ण का’ढेर हा तको उप चार गराउँथे। तर यस्तो म’हामा’रीको बेला छ, ऋ’ण पनि कसले प त्याउ ला, उनले भने।
स्राेतः सेताे पाटि
पावर बैंक पड्किदाँ कलाकार त्रिपाठी घाइते
लकडाउनमा काम नपाउँदा अभिनेत्री बने यौ’नक’र्मी, प्र’ह’री’द्वारा प’क्रा’उ